ipso-care (SO) - Ipso-care homepage
Ipso-care homepage - ipso-care (SO)
Daryeel ayaan wax u caawinnaa
Ku soo dhowoow daryeelka Ipso-care,
Khad-caawineedka ammaanka ah ee
la-talinta maskaxeed ee bulshada
Marka aad soo gasho boggeenna waxaan cagta soo dhigtay aag ammaan ah oo ay ku diyaar yihiin la-taliyeyaal danqasho leh iyo xirfadyahanno ka kala yimid waddamo kala duwan. Way ku caawinayaan, waxayna kaa gacansiin doonaan xaaladaha adag ee nolosha si aad u hesho waddada kugu hageysa fayo-qabka shaqsi iyo tan bulshaba. Waa ujeedkeenna inaan dadka u sahalno inay xalliyaan dhibaatooyinkooda iyo qilaafaadka, si loo horumariyo oo loo sii wado xiriir shaqeynaya oo lagu aflaxo oo ay qoysaskooda, saaxiibbadooda iyo kuwa ay jecel-yihiin la yeeshaan, inay go'aansadaan waxa ay sameynayaan iyo inay awood u yeeshaan inay saameyn ku yeeshaan noloshooda iyadoo lagu dabbaqayo qiimaha shaqsi-ahaaneed.
Ipso-care waxaa laga helaa muuqaal-ku-sheekeysi aad looga taxaddaray qarintiisa oo loo marayo bogga macmiilka.
Ogow wax dheeri ah
Ipso waa hay'ad bini'aadannimo oo sal-dhiggeedu yahay Jarmalka, waxay ka shaqeysaa saaxada daryeelka la-talin-maskaxeedka bulsho iyo wada-hadallada dhaqanka (www.ipsocontext.org and www.ipso-cc-afghanistan.org).
La-taliyeyaasha Ipso ee la-talinta maskaxeed waa kuwo khirad u leh fahanka xaaladaha guud iyo kuwa gaarka ah ee dadka iyo dhibaatooyinka shaqsiga ah. Waxay macaamiisha ka caawiyaan inay la-tacaalaan dhibaatooyinkooda isla markaana ay maareeyaan caqabadaha ay nolosha ku wajahaan.
Ku soo dhowow, Welcome, Bienvenue, Willkommen, Salaam (to) Ipso-care
Daryeel ayaan wax u caawinnaa. Albaabka wuu furan-yahay, fadlan soo gal
Fadlan wax ka ogow saddexda heer ee uu ka kooban yahay hannaanka la-talinta....
Hadda is-diiwaangeli oo si bilaash ah ku isticmaal Ipso-care.
qol ammaan ah
© 2022 ipso-care (SO) All rights reserved. Skip navigation
Shuruudaha iyo is-afgaradka
Siyaasadda xuquuqda gaarka ah